Home Wararka Dowlada Soomaaliya ayaa Diyaarad siday ciidan ka dajisay G/Gedo
Dowlada Soomaaliya ayaa Diyaarad siday ciidan ka dajisay G/Gedo
Wararka aan ka heleyno Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in saakay halkaas ay ka degtay diyaarad sida Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaano Haramcad.
Ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in diyaarad looga qaaday Magaalada Muqdisho, iyadoona saakay laga dejiyay Degmada Luuq ee Gobolka Gedo, waxaana halkas kusoo dhaweeyay Saraakiil ka tirsan Ciidanka dowladda.
Sidoo kale Ciidamadan Booliska ee Haramcad ayaa waxaa la sheegay in Degmada Luuq ay geysay dowladda Federaalka, isla markaana waxaa Saldhig Ciidan ka sameeysteen halkaas.
Dad ku sugan Gobolka Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in maalmihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan Gobolka ay ka jireen xiisado siyaasadeed, kuwaasi oo qaarkood ay qeylo dhaan ka muujineen Maamulka Jubbaland.
Ilaa iyo hada ma jiro wax war ah oo kasoo baxay dowladda Federaalka oo ay uga hadlayaan sababta ay Ciidamo Boolis ah u geysay Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ee dowlad Goboleedka Jubbaland.